AKHRISO: 13-ka Waddan ee ugu khatarta badan Caalamka iyo Kaalinta Soomaaliya kaga jirto | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
AKHRISO: 13-ka Waddan ee ugu khatarta badan Caalamka iyo Kaalinta Soomaaliya kaga jirto
Published: December 2, 2016, 12:28 pm
(0) Comments Qiimeyn ay soo saartay Hay’adda La-talinta Khataraha ee Verisk Maplecroft ayaa lagu muujiyey khataraha sare ee ka jira dalalka ugu khatarta badan Caalamka.
Hay’adda waxay walaac ka muujisay sida ay u sii kordhayaan Falal Dembiyeedyadda ay ka midka yihiin Tahriibinta Daroogadda, Afduubka, dhaca iyo Dhaqdhaqaaqyadda kale ee horseeda Colaadaha.
Warbixinta ayaa lagu tilmaamay inay dalalka ugu khatarta badan ku kala yaallaan Bariga Dhexe, Afrika iyo Latin America, halkaasi oo ay ka jiraan Horumarin aad u yar iyo Nidaam Siyaasadeed oo aad u abuura Colaadaha.
Hay’adda Verisk Maplecroft waxay tilmaamtay 13 Waddan oo ay ka jiraan Khatar Xagjir rr dhinaca Dembiyadda.
Dalalka qiimeyntaasi lagu xusay ayaa waxay u kala horreeyaan sidatan:
Dhinaca kale, Qiimeyn ay soo saartay Hay’adda La-talinta Khataraha ee Verisk Maplecroft ayaa lagu muujiyey inay Soimalia ka mid tahay Dalalka ugu Deganaansho La’aanta badan Caalamka, iyadoo qiimeynta qaarkoodna Somalia ku tilmaamtay Dal Fashilmay.
« Warbixinta Ka HoreysayDaawo: Wiil yar oo qaab mucjiso ah Alle u abuuray oo dadka ladegan siweyn u Caabudaan..	Warbixinta Xigto »Daawo: Sheekh Maxamed Idiris oo soo bandhigay Mucjiso siweyn looga hadal haayo dunida oo ku arkay Norway	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply